Sinazaza kambana vy kofehy vy kofehy vy nahazo ny lokon'ny lokanga mena Alemanina | SANXIA
Skelet vy vy vy sofina roa mahazo loka mena teboka mena
Famaritana:80280 * 55mm
lanja:Tokony ho 2,4kg
Fomban'ny endrika vilany:Azonao atao ny misafidy ambany ambany na boribory ambany, misy na tsy misy nozera, fomba fikirakirana sns
Ity takelaka vy-vy ity dia afaka mamorona karazan-tsakafo rehetra, toy ny salmon nendasina, paty nendasina, paty nandrahoina, pancake crispy, tofu nendasina sns. Tsy misy fonosana simika io, fa tandremo ny fikojakojana rehefa mampiasa. Mety hisy vokany tsy miraikitra tsara koa io. Izy io dia mahasalama kokoa ary mateza kokoa noho ny vilany tsy tapa-kazo. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava izy io amin'ny fampiasana tsara. Tena tian'ny vehivavy mpikarakara tokantrano izy io.
Ny fahasalamana tsy misy firakotra simika dia iray amin'ireo tombony ananany. Izy io koa dia manana savaivony 28cm lehibe, izay afaka mamorona sakafo bebe kokoa amin'ny fotoana iray ary mahafeno ny fanjifana olona 4-6. Mihalehibe ny fanambaniny, ary mamorona rindrina matevina sy ambany. Ny vy mitambatra dia manana refy volamena amin'ny fitarihana hafanana. Rehefa mafana, ny fitarihana hafanana dia mety ho haingana sy mitovy kokoa.
Ny fitarihana hafanana tsara sy ny fahafaha-mitahiry hafanana dia mety hahatonga ny sakafo ho matsiro sy mahavelona kokoa. Mandritra izany fotoana izany, na afo lehibe izany na afo kely, dia afaka mampihena ny hafanana araka ny tokony ho izy izy io, ka tsy mora ny mametaka vilany ny sakafo, na ny vao manomboka aza dia afaka mifehy tsara ny afo, tsy mahamaika intsony ny fandrahoana sakafo.
Ny vatan'ny vilany dia mandray dingana vaovao amin'ny fitsaboana hafanana nitriding (Teknolojia tsy misy fangarony). Aorian'ny famonoana ny hafanana sy ny fihenan'ny hafanana dia mihatsara ny hamafin'ny tampon'ny vilany, manatsara ny kalitaon'ny vatan'ny vilany ary manatsara ny fahaizan'ny anti-harafesina.
Famolavolana antsipirihany sy fanaingoana
Misy karazana sarony roa azonao isafidianana, safidy iray hafa, fahalalahana iray hafa. Ny karazana sarom-bilany voalohany dia ny rakotra fitaratra henjana, mahazaka hafanana sy maharitra. Azonao atao ny mandinika ny fandrosoan'ny fandrahoan-tsakafo amin'ny alàlan'ny sarony. Ny fonony faharoa dia vita amin'ny Cunninghamia lanceolata, izay tsotra sy matevina amin'ny endriny, afaka misoroka tsara ny fihorakorahana, misy fiantraikany tsara amin'ny insulation, ary mafy orina ny endriny, tsy mora vaky ary tsy mora simba.
Milamina ny fanambanin'ny vilany ary azo ampiharina amin'ny fatana isan-karazany. Ny sofina vy roa dia natao ho lehibe lehibe. Tena mety raha ampiasaina amin'ny fonon-tanana anti scald, ary azo antoka ny fitazonana azy.
Teo aloha: Ny lafaoro holandey mahasalama dia manana fahaizana mahandro tsara kokoa
Manaraka: Ny sarom-panendasana vy tsy manam-paharoa dia azo ampiasaina ho lapoaly
xtreme Iron Skillet, namel Skillet, Cast Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, t stainless Cast Iron Skillet,